Fahanka Emailka: Sida Loo Baadho Tartanka Emailkaaga | Martech Zone
Khamiis, Juun 10, 2014 Douglas Karr
Goorma ayey tartamayaashaadu dirayaan emaylladooda? Emailadaas sidee u egyihiin? Khadadka maadooyinka noocee ah ayey adeegsadaan? Maxay yihiin joornaalada email-ka ugu caansan ee warshadahaaga? Kuwani waa noocyada su'aalaha looga jawaabi karo iyadoo la adeegsanayo Fahanka Emailka, qalab loogu talagalay suuqgeeyayaasha emailka inay ku baaraan joornaalada emailka ugu caansan iyo / ama tartankaaga.
Email Insights wuxuu horey uhelay joornaalada ugu caansan ee ay abaabushay warshadaha si aad si sahal ah uhesho una dib uhesho joornaalada aad rabto inaad baarto:
Marka aad soo koobto warshad ama xitaa diraha, waxaad horay u eegi kartaa emaylka dhabta ah:
Astaamaha cajiibka ah ayaa ah inaad daawan karto mowduuc mawduuc daruur ah ereyada ugu badan ee la adeegsaday ee khadkooda mawduucyada, khadadkooda ugu dambeeya ee maadada, iyo khadadka maadooyinka ugu dheer uguna gaaban.
Waxaa laga yaabaa in muuqaalka ugu xiisaha badan ee Email Insights uu yahay inay sidoo kale la socdaan inta jeer ee loo diro rukunka, maalinta la diray iyo xitaa waqtiga la soo diray. Tani waxay ku siin kartaa iimayl suuq leh dhammaan wixii ay u baahan yihiin si ay u horumariyaan jadwalka suuqgeynta iimaylka, u habeeyaan waqtiga dirista, iyo horumarinta qadka maaddada la tartamaya.
Isticmaalka qalabkooda waxay ku siin karaan xoogaa dhiirigelin ah naqshadeynta emaylkaaga soo socda - hubi Fahanka Emailka - waxay haystaan ​​tijaabo 30 maalmood ah iyo qiime jaban oo ay ku bilaabi karaan!
Tags: tartanka emaylkaiimayl cilmi baaris tartan ahnaqshadeynta emaylkaqaababka naqshadeynta emaylkafikradaha emaylkakhadadka mawduuca emaylkajoornaalada emailka ugu caansantusaalooyinka warsidahatusaalooyinka warsidaha
Jul 10, 2014 markay ahayd 9:09 AM
Boostada weyn Douglas! Waad ku mahadsan tahay wadaagista!